जो शतकबाट १ रनले चुके | Hamro Khelkud
एजेन्सी – क्रिकेटमा शतकको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । कमजोर होस वा बलियो टोलीविरुद्ध होस् शतकको आवश्यकता हरेक खेलाडीको करिअरमा हुन्छ ।
केहि शतक स्मरणीय हुन्छन् त केहि छोटो समयका लागि सम्झिने हुन्छ । टोलीको आवश्यकता र महत्त्वलाई हेरेर शतकको महत्त्व पनि फरक पर्छ । टि२० क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्नु पक्कै सामान्य कुरा होईन । तर पछिल्लो समय ब्याटिङमा आएको परिवर्तनले टि२० क्रिकेटमा पनि शतक खासै असामान्य हुँदैन ।
संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई) मा १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को सुरुवाती खेलमा ब्याट्सम्यान बलरमाथि हावी भएका छन् । दुई सय रन पूरा गर्नु पनि सामन्य नै हुन थालेको छ । केहि अवस्थामा त दुवै टोलीले २ सय रनको आँकडा पारे गरेका छन् ।
प्रतियोगिता पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन थालेको छ । अधिकांश खेल अन्तिम ओभरमा पुगेका छन् । केहि सुपर ओभर पनि भएको छ । मुम्बई र पन्जाबबीचको खेलमा त नतिजा निकाल्न दोस्रो पटक सुपर ओभरको सहायता समेत लिनुपर्यो ।
शतक प्रहार गर्नुपनि दुर्लभ भन्ने अवस्था छैन । दिल्लीका ओपनर शिखर धवनले इतिहासमै पहिलो पटक लगातार दुई खेलमा शतक प्रहार गरे । किंग्स इलेभेन पञ्जाबका ओपनर लोकेश राहुल र मयंक अग्रवालले शतक प्रहार गरिसकेका छन् । अन्य ब्याट्सम्यान पनि शतक नजिक पुग्दै आएका छन् ।
आइपिएल इतिहासका केहि यस्ता ब्याट्सम्यान जसले ९९ रनमा आउट हुँदै शतक बनाउबाट चुके :
५.सुरेश रैना, चेन्नई (हैदराबादबिरुद्ध, २०१३)
चेन्नई सुपर किंग्सका प्रमुख ब्याट्सम्यान सुरेश रैना यस सिजन पारिवारिक कारण आइपिएल खेलेका छैनन् । रैना आइपिएलका एक सर्वाधिक सफल ब्याट्सम्यान हुन् । रैना सन् २०१३ मा सनराइजर्स हैदराबादबिरुद्ध ९९ रनमा अविजित रहेका थिए ।
राजिभ गान्धी इन्टरनेशनल स्टेडियमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको चेन्नईले तीन विकेटको क्षतिमा २ सय २३ रन बनाएको थियो । जसक्रममा रैना ५२ बलमा ११ चौका र ३ छक्का सहित ९९ रनमा अविजित रहेका थिए ।
रैनाले अन्तिम बलमा डरेन शामीलाई चौका प्रहार गरेपनि त्यो शतकका लागि पर्याप्त थिएन । रैना ९९ रनमा अविजित रहने पहिलो खेलाडी बनेका थिए । उक्त खेलमा चेन्नई ७७ रनले विजयी भएको थियो ।
४. विराट कोहली, बेंगलोर (दिल्लीबिरुद्ध, २०१३)
सन् २०१३ मा विराट कोहली तत्कालिन दिल्ली डेयरडेभिल्स (दिल्ली क्यापिटल्स) विरुद्ध ९९ रनमा रन आउट हुन पुगेका थिए । टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको बेंगलोरले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा १ सय ८३ रन बनाएको थियो ।
उमेश यादवको २० औं ओभरको अन्तिम बलमा दुई रन लिनेक्रममा कोहली रन आउट हुन पुगेका थिए । उक्तक्रममा कोहलीले ५८ बलमा १० चौका र ४ छक्का प्रहार गरेका थिए । बेंगलोर ४ रनले विजयी भएको थियो ।
३. क्रिस गेल, पन्जाब (बेंगलोरविरुद्ध, २०१९)
युनिभर्सल बोस क्रिस गेलले सन् २०१९ मा किंग्स इलेभेन पन्जाबबाट बेंगलोरबिरुद्ध ९९ रनमा अविजित रहेका थिए । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले ४ विकेटको क्षतिमा १ सय ७३ रन बनाएको थियो ।
गेल ६४ बलमा १० चौका र ५ छक्का सहित ९९ रनमा अविजित रहेका थिए । गेलले मोहम्मद शिराजलाई २० औं ओभरको अन्तिम बलमा चौका प्रहार गरेपछि ९९ रनमा पुगेका थिए । तर पन्जाबले ८ विकेटले खेल गुमाउन पुग्यो ।
२. पृथ्वी शा, दिल्ली (कोलकाताबिरुद्ध, २०१९)
सन् २०१९ मा दिल्ली क्यापिटल्सका युवा ब्याट्सम्यान ओपनर पृथ्वी शा पनि एक रनको कारण शतक बनाउन चुकेका थिए । कोलकाता नाइट राइडर्सले प्रस्तुत गरेको १ सय ८६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउने क्रममा शा ले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए ।
तर ल्योकी फर्गुसनको १९ औं ओभरको तेस्रो बलमा ठूलो सट खेल्ने धुनमा विकेटकिपर दिनेश कात्र्तिकबाट ५५ बलमा १२ चौका र ३ छक्का सहित ९९ रनमा क्याच आउट भएको थियो । उक्त खेलमा दिल्ली सुपर ओभरमा विजयी भएको थियो ।
१. ईशान किशन, मुम्बई (बेंगलोरबिरुद्ध, २०२०)
मुम्बईका युवा ब्याट्सम्यान ईशान किशन पनि आइपिएलमा शतक बनाउन एक रनले चुके । बेंगलोरबिरुद्ध २ सय २ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा किशन अन्तिम ओभरको पाँचौ बलमा क्याच आउट हुन पुगेका थिए ।
अन्तिम दुई बलमा जितको लागि ६ रन चाहिँएको अवस्थामा पाँचौ बलमा इसुरु उडानालाई ठूलो सट खेल्नेक्रममा डिपमिड विकेटमा देवदत्त पाडिक्कलबाट ९९ रनमा क्याच आउट हुन पुगेपछि शतक बनाउन सकेनन् । उनले ५८ बलमा ९ छक्का र २ चौका प्रहार गरे । मुम्बई सुपर ओभरमा पराजित हुन पुग्यो ।